siifsiin – Page 30 – Oromo Literature and Culture
Dubbistoota keenyaa akkuma Jiildii keenya 8ffaa irrati waa'ee baayoo gaazii maal akka ta'e ibsuu yaaluun keenya beekamaa dha. Haaluma kanaan kanatti aansuun imnmoo akkaataa qophaa'iinsaa fi mala itti fayyadama baayoo gaasii jarreen sadan armaan gadii kana haa ilaallu: Isaanis aadde Caaltuu, aadde Tolashee fi aadde Alamiituu walii wajjin faayidaa isaa mariyachaa jiraachuu isaaniiti. Bifuma wal … Continue reading Baayoo Gaazii
Tuulamni Ijoollee sadii qaba.Isaanis Daaccii, Bachoo fi Jillee dha. Yeroo mara namooti hedduun gaafa maqaa Sooddoo jedhu dhagayan akka qomoo Guraageetti kan ilaalan hedduu dha. Sooddoon ijoollee sadii godhatee lafasaa maqaasaatiin moggaafatee irra jiraachaa ture. Sadan ijoollee sooddoo; Odituu, Ummee(Tum’e) fi Liiban jedhamu. Isaan kunniinidha kan har’a sadan sooddoo jedhamanii beekaman. Lafti Sooddoo naannoo Shawa … Continue reading Sadan Sooddoo
February 16, 2017 February 16, 2017 1 Comment
Ibsa walii galaa: Rakkoon dhibee sukkaaraa addunyaa irratti haala dinqisiisaa ta’een ol ka’aa jira. Dhibbeen sukkaaraa biyyoota adduunyaa kana dura hin babal’dhanne keessattifi Ityoopiyaa dabalatee haala yaadeessaan mul’aachuu irraatti argaama. Akkaataa maddi qoorannoo a.l.A.bara 2010 mul’isutti addunyaalleessa irratti dhukkubsatoota miiliyoona 230 kan argaaman yoo ta’u; lakkoofsa kana harka sadii keessaa lama biyyoota guddataa jiraan keessatti argaama. … Continue reading Dhibbee Sukkaaraa
Daa’imaan dandeetti dubbisuu fi barreessuu isaanii dagaagfachuu (gabbifachuu) kan qaban, osoo mana baruumsa idilee (kutaa 1ffaa) hin galle dura osoo ta’ee filatamaa dha. daa’imman dandeetti dubbisuu fi barreessuu isaanii dagaagfachuu irratti, carraaqiin isaan maxxansaa fi kitaabota garagaraa dubbisuudhaan muuxannoon argatan, milkaa’ina fuul- duree isaaniitiif baay’ee murteessaa dha. Sababni isaas, daa’imman kunniin yeroo wantoota dubbisuu fi … Continue reading Save the Children
Giddu-gala Aadaa Oromoo
Mootummaan naannoo Oromiyaa waggoottan darban keessatti aadaa,afaan,seenaafi aartii uummata Oromoo dagaagsuufi guddisuuf,hojiiwwan gurguddaa baayi’ee hojjetee jira.Kanneen keessaa Afaan Oromoo afaan hojii mootummaa naannoofi barnootaa akka ta’u godheera.Afaan Oromoo afaan Saayinsii,tekinooloojii,hogbarruufi artii ta’uun akka dagaagu,baldhinaan irratti hojjetameera. Kana malees dagaagina aadaa Oromoo mirkaneessuu keessatti ga’ee mataa’saatii kan qabu giddu-galli aadaa Oromoo, magaalaa guddaa Oromiyaa kan taate … Continue reading Giddu-gala Aadaa Oromoo
Seenaa Atileetiksii Maaraatoonii
Waldorgommiin fiigicha Maaraatoonii k.m.42.195 ykn Maayilii 26.218 kan fagaatudha. Yaadannoon isaas a.l.A dhaloota kiristoos dura (B.C) bara 490 biyyi Giriikii biyya dur Impaayera Pershiyaa jedhamuu (Iiraan ammaa) wajjin dirree waraanaa iddoo Maaraatoon jedhamu irratti yeroo dheeraaf wal waraanaa erga turan booda Giriikiin hinjifannaan loltuun gooti lammii Girikii Fiidipiidis(Phiedppides) jedhamu oduu gammachiisaa kana himuuf boqonnaa tokko … Continue reading Seenaa Atileetiksii Maaraatoonii
Hundee Rakkoolee Biyyoota Bahaa Giddu Galeessaa
Adduunyaa irratti Biyyooti bahaa giddu galeessa jedhaman yeroo baayi’ee Gibtsii(Misira) irraa kaasee hamma Armeeniyaa gidduutti uummattooti argaman; Arabooti, Pershiyaa,Turkiifi Kuurdoti lakkoofsa baayi’ee kan qaban si’a ta’an, faallaa kanaan lakkoofsa xinnaa kan qaban immoo Armanoota,Asoorota,Serkaasiyaanota,deruzoota,Ayihudotaafi k.k.f keessatti argamu. Naannoo biyyoota bahaa giggu galeessa kunniin adduunyaa kaan irraa adda kan isaan godhu,1ffaa, iddoo ka’umsa amantiiwwan adduunyaa guguddaa … Continue reading Hundee Rakkoolee Biyyoota Bahaa Giddu Galeessaa
Maafan aadaa deemaa?
Koo garaan bosona miti jamaa Keessa koon gubadhee maafan aadaa deema. Hin dubbadhu hin jedhu anoo nan dubbadha Quuqqaa garaa kootiin baaseen obbaafadha. Callisees argeeraam baayi’eeyyuun callise Innis ittuu homaa gowwaa nafakkeesse. Utuman beekuu akka namaa hin beeknee Arrabsamee dheekkamamee kankoo kennee Natti fe’an baadhee kan naaf kennan nyaadhee Nafakkeessuu hin oolle cirumayyuu harree Yoos … Continue reading Maafan aadaa deemaa?
HARKA DHIQANNAA DHIBEEN HARKAAN NAMATTI DARBA ''Tokkoon tokkoon konkolaataa gara keenyatti dhufaa jiran hubannee ilaaluu barbaachisa” jechuudhaan ajajaan waraanaa tokkoo loltootasaa barsiisa.Diinni dhoksaadhaan daangaa cabsee seenuu yaala garuu karaan inni irra dhufu miilaan deemuuf itti fagaata. Kanaafuu konkolaataadhaan akka hindhufne hubachuu qabna.Tokkicha daangaa keenya keessa seennaan ofirraa loluun nutty ulfaata. Waraana isa dhugumaa keessatti diinni … Continue reading Harka Dhiqannaa
Walaloo Qubee Afaan Oromoon
Afaan Oromoon qophaa isaatti jechaa fi hiika mataa isaa danda’e salphaatti uumuu kan danda’uu fi itti fadamnisaa kan namatti tolu, qubee Afaan Oromooti. Kanaatiif mee bifa armaan gadiitin haa hordofnu: A: Adii fi Gurraacha B: Baacaa fi Bulchaa C: Cimdeessaa fi Caalii D: Daddafaa fi Dabalii E: Eebbasaa fi Eellanii F: Fayyeeraa fi Feeneeni G: … Continue reading Walaloo Qubee Afaan Oromoon